လိင်တူစုံမက်ခြင်း - ဝီကီပီးဒီးယား
လိင်တူစုံမက်ခြင်း (Homosexuality) ဆိုသည်မှာ လိင်တူနှစ်ယောက်ဖြစ်ကြသည့် အမျိုးသားနှစ်ယောက်အကြား (သို့) အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်အကြား ချစ်သူအဖြစ်စုံမက်ခြင်း၊ လိင်ဆက်ဆံရန် စိတ်ဝင်စားခြင်းမှတဆင့် လိင်ဆက်ဆံရန် အပြုအမူပြုလုပ်ခြင်းများကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။"လိင်တူဆက်ဆံခြင်းဆိုသည်မှာ လိင်ဆက်ဆံရာ အဓိက (၃) မျိုးထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး လိင်တူလိင်ကွဲ နှစ်မျိုးလုံးဆက်ဆံသူနှင့် လိင်ကွဲဆက်ဆံသူ၊ ၎င်းတို့အကြားတွင် လိင်ဆက်ဆံမှု လုံးဝမရှိသူများလည်း ရှိသည်။ သိပ္ပံ နှင့် ဆေးပညာနားလည်မှုများအရ မည်သူနှင့် လိင်ဆက်ဆံမည်ဆိုသည်မှာ ရွေးခြယ်မှုတစ်ခုမဟုတ်ဘဲ လွန်စွာရှုပ်ထွေးသော ဇီဝဗေဒနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် အချက်အလက်များနှင့် သက်ဆိုင်နေသည်ဟု ဆိုသည်။  လိင်တူဆက်ဆံမှုများအား သဘာ၀မကျခြင်းနှင့် မူမမှန်သော ပြုရပ်များဟူ၍ ပြောဆိုကြသူများရှိနေသော်လည်း၊သုသေသန စမ်းသပ်ချက်များအရ လိင်တူဆက်ဆံခြင်းမှာ လူသားတို့၏ လိင်ဆက်ဆံရန် ဇီဝပြောင်းလဲခြင်းတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး စိတ်ဝေဒနာအရ ဖောက်ပြန်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းမဟုတ်ဟု တွေ့ရှိရသည်။  အခြေအမြစ်မရှိသော တွေးခေါ်ထင်မြင်ချက်များနှင့် တန်းတူညီမျှဆက်ဆံမှုမရှိခြင်းများကြောင့် လိင်တူဆက်ဆံသူများနှင့် လိင်တူလိင်ကွဲဆက်ဆံသူများတွင် စိတ်ဝေဒနာ ခံစားရနိုင်ခြင်းမျိုး ရှိသည်။ 
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကာယကံရှင် လိင်တူဆက်ဆံသူများအပေါ် ပတ်ဝန်းကျင်မှ ခွဲခြားခေါ်ဝေါ်ခြင်းအမျိုးမျိုးရှိသော်လည်း နိုင်ငံတကာတွင် အများအားဖြင့် အမျိုးသမီးများဖြစ်လျင် လက်စဘီယံ (lesbian) အမျိုးသားများကိုဂေး (gay) ဟုခေါ်လေ့ရှိသော်လည်း၊ ဂေးကို အမျိုးသားရော အမျိုးသမီးရောပါ ပုံမှန်အားဖြင့် ကိုယ်စားပြုခေါ်ဝေါ်ကြသည်။ မိမိကိုယ်ကို မိမိ ဂေး (သို့) လက်စဘီယံဟု ပြောဆိုသူများသည် လိင်တူဆက်ဆံသည့် အတွေ့အကြုံရှိခဲ့သူများဖြစ်ကြပြီး အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် သူတေသီများအတွက် ယနေ့တိုင် တိကြစွာ အချက်အလက်ကောက်ယူရန် ခက်ခဲဆဲဖြစ်သည်။ အထူးစုံစမ်းလေ့လာချက်အရ (၂) ရာခိုင်နှုန်းမှ (၁၀) ရာခိုင်နှုန်းရှိ လူဦးရေသက်တမ်းတလျောက်တွင် လိင်တူဆက်ဆံမှုပုံစံမျိုးသဖွယ် ဆက်ဆံမှုမျိုးရှိခဲ့သည်။. ၂၀၀၆ခုနှစ် လေ့လာစမ်းစစ်မှုတစ်ခုတွင် အမည်မဖော်လိုသူ ၂၀%တို့မှ လိင်တူဆက်ဆံရန် စိတ်ခံစားမှုတချို့ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်ဟု ဖွင့်ဟခဲ့သော်လည်း၊ ၂-၃%သည် လိင်တူဆက်ဆံသူများဖြစ်သည်ဟု ဝင်ခံပြောဆိုကြသည်။ လိင်တူဆက်ဆံခြင်း အပြုအမူမျိုးကို လူသားတမျိုးထဲတွင် တွေ့ရှိရခြင်း မဟုတ်ဘဲ လူသားမဟုတ်သည့် တရိစ္ဆာန်များတွင်လည်း တွေ့ရှိနိုင်သည်။
လိင်တူဆက်ဆံသူများသည် ဘဝကြင်ဖော်များအဖြစ် ခံယူကြသူများရှိပြီး လက်တလောတွင်သာ နိုင်ငံရေးအဆင့်အထိ ၎င်းတို့၏တည်ရှိပုံနှင့် ရပ်တည်နိုင်ပုံကို လက်ခံလာကြခြင်းဖြစ်သည်။  ၎င်းလိင်တူဘဝပေါင်းဖော်များကိုကြည့်လျင် စိတ်ခံစားမှုအရ လိင်ကွဲဇနီးမောင်နှံများအတိုင်းဖြစ်သည်။  လိင်တူဘဝပေါင်းဖော်များကို သမိုင်းတလျှောက်တွင် ပုံစံအမျိုးမျိုးနှင့် သက်ရောက်ပုံအမျိုးမျိုးပေါ်မူတည်၍ အသိအမှတ်ပြုလက်ခံသူများရှိခဲ့ပြီး၊ ကန့်ကွက်ရှုံ့ချသူများလည်းရှိခဲ့သည်။  ၁၉ရာစုနှစ်ခန့်မှစ၍ ကမ္ဘာနှင့်ချီကာ LGBT ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုများ၊ တရားဥပဒေဘောင်အတွင်း အသိအမှတ်ပြုစေရန် ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် လူအများသိစေရန် ပညာပေးထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းများပြုလုပ်၍ LGBT များအတွက် လက်ထပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် အတူပေါင်းသင်းနေထိုင်ခွင့်များ၊ ကလေးမွေးစားခွင့်များ၊ ကလေးအုပ်ထိန်းခွင့်များ၊ အလုပ်ခွင်တွင် တန်းတူညီတူဆက်ဆံရေးများ၊ ကျန်းမာရေးထောက်ပံ့မှု တန်းတူညီတူရရှိစေရေးများ၊ မည်သည့်လိင် စိတ်ဝင်စားသည်ကို မခွဲခြားဘဲ စစ်မှုထမ်းခွင့်များ၊ နှိပ်ကွပ်ဆက်ဆံခြင်းမျိုး ပပျောက်စေရန်နှင့် အကာအကွယ်ပေးနိုင်ရန် စတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။
အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြထားသောဆောင်းပါး - လိင်တူဆက်ဆံခြင်း၏ ပညာရပ်ဝေါဟာရ
လိင်တူဆက်ဆံခြင်းကို ခေါ်ဆိုသည့် အင်္ဂလိပ်အက္ခရာ homosexual သည် ဂရိဘာသာ နှင့် လာတင်ဘာသာ ပေါင်းစပ်ထားသည့် ὁμός homos၊ တူညီသည်ဟု အဓိပ္ပါယ်ရပြီး လာတင်ဘာသာဖြစ်သည့် homo၊ လူသတ္တဝါ ဟုဆိုသည့် စာလုံးနှင့် မတူညီပါ။ လိင်တူနှစ်ဦးကြားတွင် စုံမက်ခြင်းကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပြီး လက်စဘီယံများလည်း ပါဝင်လေသည်။ ဂေး ဆိုသည့် စကားလုံးသည် အများအားဖြင့် လိင်တူဆက်ဆံသူ ယောက်ျားများကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သော်လည်း LGBT လိင်တူဆက်ဆံသူများအားလုံးကို ခြုံငုံ၍ ခေါ်ဆိုသည့် စကားလုံးလည်း ဖြစ်သည်။ လိင်ဆက်ဆံမှုတွင် အမျိုးသမီးချင်းဖြစ်ပါက လက်စဘီယံဟုခေါ်ဆိုပြီး ထိုစာလုံးသည် ဂရိကျွန်းအမည်ဖြစ်သည့် 'လက္စဘိုစ်' ဆိုသည်မှ ဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်ပြီး ထိုကျွန်းတွင် နေထိုင်သည့် ကဗျာဆရာမ ဆပ်ဖို Sappho မှ သူနှင့် အမျိုးသမီးငယ်တို့ ချစ်ကျွမ်းဝင်ခဲ့ကြသည့်အကြောင်းကို ဖော်ကျူး ရေးသားခဲ့သည့် နေရာလည်းဖြစ်သည်။
အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြထားသောဆောင်းပါးများ - အယ်လ်ဂျီဘီတီ သမိုင်း နှင့် အယ်လ်ဂျီဘီတီ သမိုင်း အချိန်ပြဇယား
ရွိုင် နှင့် စီလို၊ တို့သည် နယူးယောက်မြို့ရှိ မြို့လယ်ပန်းခြံတိရစ္ဆာန်ရုံမှ ပင်ဂွင်းအထီးလေးနှစ်ကောင်ဖြစ်ပြီး ပုံထဲတွင် မြင်ရသည့် ပင်ဂွင်းအမျိုးအစားဖြစ်သည်။ ပင်ဂွင်းဥမှ အကောင်ပေါက်ဖွားနိုင်ရန် ထိန်းသိမ်းစောင့်လျှောက်မည့် မိဘများလိုအပ်နေသည့်တွက် ၎င်းတို့အား ထိန်းသိမ်းရန်ပေးအပ်ခဲ့ရာမှ ပင်ဂွင်းဥများကို အောင်မြင်စွာ ပေါက်ဖွားနိုင်ရန် ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ကမ္ဘာတွင် လူအသိများခဲ့သည်။
လိင်တူဆက်ဆံသူတို့၏ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုများကို ပတ်ဝန်းကျင်မှ အချိန်အလိုက်ပုံစံမျိုးမျိုး ဆက်ဆံလာခဲ့ကြသည်။ အမျိုးသားချင်း လိင်တူဆက်ဆံခြင်းနှင့်အတူ အများမှ လက်ခံမှုနှင့် ဆန့်ကျင်မှု မပြုလုပ်ထိုက်သော အရာများဟုဆိုကာ တရားဥပဒေများ ရေးဆွဲခြင်းနှင့် တရားစီရင်ခြင်း၊ သေဒဏ်ပေးခြင်းမျိုးလည်း ရှိခဲ့သည်။
သမိုင်းတလျှောက်ကို လေ့လာကြည့်လျှင် စက်မှုမထွန်းကားမီ အစောပိုင်းကာလတွင် လိင်တူဆက်ဆံသူများကို ပိုမိုဆန့်ကျင်မှုများတွေ့ရှိရပြီး ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု (၄၂) မျိုးမှ (၄၁) ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးသည် ဆန့်ကျင်ခဲ့ကြပြီး (၂၁) ရာခိုင်နှုန်းသည် လက်ခံသူများနှင့် လျစ်လျူရှုထားသူများဖြစ်ကြပြီး၊ ၁၂ရာခိုင်နှုန်းသည် ထိုအစဉ်အလာများရှိခဲ့ဟုဆိုသည်။ လူမျိုးခွဗေဒ ၇၀ ခုမှ ၅၉ ရာခိုင်နှုန်းသည် လိင်တူဆက်ဆံမှုမျိုး မရှိခဲ့၊ ရှိခဲ့လျင်လည်း နည်းပါးသည်ဆိုကြပြီး၊ ၄၁ရာခိုင်နှုန်းကမူ လိင်တူဆက်ဆံခြင်းမျိုး ရှိခဲ့ပြီး ထူးဆန်းသည့် အစဉ်အလာမဟုတ်ဟု ဆိုသည်။
အဗရာဟာမစ်ဘာသာများ (ဂျူး၊ ခရစ်ယာန်နှင့် အစ္စလာမ်ဘာသာများ)နှင့် ဆက်နွယ်နေသည့် ယဉ်ကျေးမှုများတွင် လိင်တူနှိမ်နင်းရေးဥပဒေများရှိခဲ့ပြီး၊ အချို့ခရစ်ယာန်ဂိုဏ်းများတွင်လည်း လိင်တူဆန့်ကျင်ရေးဥပဒေများ ရေးသားခဲ့ကြပြီး၊ လိင်တူဆက်ဆံခြင်းကို သဘာဝဆန့်ကျင် ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများဖြစ်ဆိုကြသည်။ ယောက်ျားများအကြားစအိုဖြင့် လိင်ဆက်ဆံခြင်းကို နှိမ်နင်းခြင်းသည် ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်များအကြားတွင်လည်း တွေ့ရှိနိုင်သည်။ ဂရိသမိုင်းတလျှောက်တွင်လည်း မကြခဏ တွေ့ရှိနိုင်ပြီး၊ ပလာတို အချိန်ကာလအထိ သဘာဝ မဟုတ်ဟု ဆိုကြသည်။ 
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ "Sexual Orientation, Homosexuality, and Bisexuality", American Psychological Association, retrieved 2010-03-30 Text "HelpCenter.org " ignored (help)
↑ ၂.၀ ၂.၁ Page 30 Case No. S147999 in the Supreme Court of the State of California, In re Marriage Cases Judicial Council Coordination Proceeding No. 4365(...) - APA California Amicus Brief — As Filed (PDF)။ 2010-12-21 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Robinson၊ B. A. (2010)။ Divergent beliefs about the nature of homosexuality။ Religious Tolerance.org။ September 12, 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၅.၀ ၅.၁ "Therapies" to change sexual orientation lack medical justification and threaten health။ Pan American Health Organization။ 26 May 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 26 May 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။archived here .
↑ ကိုးကား အမှား - Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named apa2009
↑ Billy JO, Tanfer K, Grady WR, Klepinger DH (1993). "The sexual behavior of men in the United States". Family Planning Perspectives 25 (2): 52–60. doi:10.2307/2136206. PMID 8491287.
↑ "Prevalence and Social Distribution of Men Who Have Sex with Men: United States and Its Urban Centers" (1995). The Journal of Sex Research 32 (3): 245–54. doi:10.1080/00224499509551795.
↑ Laumann, E. O., Gagnon, J. H., Michael, R. T., & Michaels, S. (1994). The social organization of sexuality: Sexual practices in the United States. Chicago: University of Chicago Press.[စာမျက်နှာ လိုအပ်]
↑ Wellings, K., Field, J., Johnson, A., & Wadsworth, J. (1994). Sexual behavior in Britain: The national survey of sexual attitudes and lifestyles. London, UK: Penguin Books.[စာမျက်နှာ လိုအပ်]
↑ ကိုးကား အမှား - Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named Biological Exuberance: Animal
↑ Lesbian | Define Lesbian at Dictionary.com။ Dictionary.reference.com။ 2010-08-24 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Smith၊ Dinitia။ "Love That Dare Not Squeak Its Name"၊ February 7, 2004။ 2007-09-10 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=လိင်တူစုံမက်ခြင်း&oldid=539974" မှ ရယူရန်
၁၉ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၂၂:၃၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၁၉ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၂၂:၃၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။